Ukuhanjiswa kweentyatyambo zeentyatyambo - ihlala ikhululekile eMoscow
Emva kokuba iodolo ibekiwe kwisiza, ulwazi malunga noku kwangoko luya kwinkonzo yokuhanjiswa kwento ephumayo okanye kwintyatyambo yabucala oyikhethileyo. Unokubeka iliso kweliphi ixesha iodolo yakho isebenzisa idatha kwiakhawunti yakho kwiwebhusayithi.
Ukuhanjiswa eMoscow simahla (ngaphakathi kwemida yesixeko). Ukuhanjiswa kukhululekile ukuba akuyi kugqitha kumjikelo wokujikeleza. Ukuba umamkeli we-bouquet akekho eMoscow, ixabiso lenkonzo lisetwa kwivenkile yeentyatyambo okanye ngqo kwi-florist kwaye ibalwa ngokuzenzekelayo ngokuxhomekeke kwinani leekhilomitha ukusuka kumjikelezo ojikelezayo ochazwe kwifom yoku-odola. Iya kuxhomekeka kumgama, ngokwahlukeneyo.
Ixesha apho isipha siya kusiwa khona sixhomekeke kubunzima bomsebenzi kunye nemeko yezithuthi. Inkcazo yempahla kwisiza ibonisa ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa isipha eMoscow. Emva kokuba ubeke iodolo yakho, uya kufumana iSMS echaza ukuba iodolo yamkelwe. Kwaye emva koko-ukuba i-odolo ihanjisiwe, kwaye unokubona nefoto ye-bouquet ehanjisiweyo kunye nefoto yomamkeli, ukuba umntu obonelweyo akazange ale ukuthatha isithombe kunye nesipha.
Izimvo malunga zokuzilungisa
Abanini abonwabileyo bee-bouquets
Uvimba wee bouquets